Bravo: Wepu Akaebe Video na Ntaneti | Martech Zone
Bravo: Capture Video Akaebe na ntanetị
Tọzdee, Eprel 26, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ọtụtụ saịtị ga-erite uru site na vidiyo ma ọ bụ tinye akwụkwọ ebe ndị ahịa nwere ike idekọ ozi vidiyo maka ụlọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, ijide, bulite na nnabata vidiyo ndị ahụ nwere ike ịbụ ihe mgbu. Obi nwere olile anya igbanwee nke ahụ site na ọrụ ọhụụ ha, na-ekwe ka ndị ahịa gị dekọọ site na kamera igwefoto ha ma were ya na peeji ọdịda ọdịda maka gị!
Nke a bụ nkọwa nke ọrụ ahụ:
Nke a bụ ọrụ Bravo kọwara:
Anyị mepụtara peeji nke ọdịda vidiyo nke gị - Onyinye vidiyo anyị na-eme enyi na-eji akara gị mara ma mee ka ndị na-ege gị ntị mara ihe ịchọrọ ka ha kwuo.
Ndị na-ege gị ntị na-edekọ vidiyo ha nke 30 - Ndị ahịa gị ma ọ bụ atụmanya gị nwere ike idekọ ozi ha, ihe ha kwuru ma ọ bụ ajụjụ na sekọnd na-eji kamera ha.
Lelee ma kekọrịta vidiyo gị ebe ọ bụla na weebụ - Gbasaa mmetụta ọhụrụ gị na weebụsaịtị gị ma ọ bụ site na mgbasa ozi mmekọrịta. Bravo na-enye gị ohere ibido humanizing web gị, 30 sekọnd n'otu oge.
Tags: ndị akaebe ndị ahịannyocha ngwaahịavidiyo nke onye ọrụ
Njem Ozi Email na Igbe mbata
Gịnị Mere Don't Amaghị Onye M Bụ?
Mee 1, 2012 na 4: 36 AM
Ndị dị otú ahụ bara uru posts
Mee 7, 2012 na 8: 29 PM
Ọ dị ka asọmpi dị na akaebe vidiyo ndị ahịa na-ekpo ọkụ. Enwetara m akwụkwọ ozi sitere na ọrụ ọhụrụ, nke a na-akpọ Crowdrave nke na-enye ọrụ yiri ya.